Qabsashada Shiinaha ee Hakinta leh Neoprene Insert oo loogu talagalay fiilooyinka ADSS Soosaarka iyo Warshad | JOOJI
Clamps Suspension with Neoprene Insert for ADSS fiilooyinka
Xirmooyinka ka joojinta oo leh guntinta neoprene ee fiilooyinka ADSS Faahfaahin Xirida hakin ee wareegga ADSS ee dhammaan istiraatiijiga isdifaacaya A ...
Xirmooyinka ka joojinta oo leh guntinta neoprene ee fiilooyinka ADSS
Xayiraadda xayiraadda ee wareegga ADSS ee dhammaan fiilada isdabajooga ee isku xirta ADSS ee loo isticmaalo wareegga fiilada indhaha ee indhaha. Waxyaabahan fiilooyinka fiilooyinka fiilooyinka ah ayaa lagu rakibi karaa taallo gaaban oo ah tiirar dhexdhexaad ah caabbinta mashiinka ku habboon ee ADSS-ka hakintiisa haysa waxaa lagu keydin karaa iyadoo la adkeeyo lowska illaa xoogga loo baahan yahay laga gaarayo. Ama is-hagaajinta miisaanka cabirka. noqo cabirro kaladuwan, laakiin marinka fiilooyinka fiilada indhaha waa inuu ahaadaa mid toosan xaglo illaa 25 digrii ah
Xirmooyinka ka-hakin waxaa loogu talagalay inay bixiyaan ganaax 5 illaa 20mm fiilooyinka ADSS-ka anteenada ee ulaha dhexe ee khadadka fiilooyinka leh xagal <20 ° ee shabakadaha marin-u-helka (ilaa 100m).
1.Laba cabbir si loo daboolo xadiga buuxa ee fiilooyinka ADSS min 5 ilaa 20mm.
Qaabka J Hook-ka ayaa u oggolaanaya inuu si toos ah xadhiggu uga dhammaado fiilada.
3.Kalaabadaha ganaaxa waxaa si toos ah loogu xaqiijin karaa tiirarka iyadoo la adeegsanayo boolal ama faashado.
4.Hook haysa sidoo kale lagu rakibi karo on handarraabbadeedii jillaab si ay u bixiyaan qaar ka mid ah barta ganaax dabacsan oo ku siin ilaalinta dheeraad ah in ay cable ka soo horjeedka gariirka dabaysha.
Sidee loo rakibaa isku haynta J cilad haysa?
Tallaabada 1: Ku dheji j-hayaha hakin jillaab ah tiir adoo ku xiraya biraha birta ah ama haynta faraska.
Tilaabada 2: Gali xarigga godka J jiska jirka haysa.
Tallaabada 3: Adkee lowska si jirka ugu muhiimsan ee qaybta cinjirka uu si adag u xiro fiilada
Ma wax fudud oo dhakhso leh baa?
J jumiska haysa ee loogu talagalay fiilada fiilada indhaha ee ADSS waxay leedahay laba nooc, taxane HC ah iyo taxane PS ah Muuqaalka labada nooc waa isku mid.
waxa udhaxeeya labada nooc waa awooda iyo cabirka cabirka. nooca PS wuxuu ka weynyahay taxanaha HC.
Cabirka taxanaha PS wuxuu ka ballaaran yahay taxanaha HC.
Xeerka alaabta Xajmiga cabirka (mm) Awood (kN) Maaddooyinka
HC5-8 5-8 4 Stell galvanized, UV caag ah oo u adkaysta
HC8-12 8-12 4
HC10-15 10-15 4
HC15-20 15-20 4
Moodooyinka: PS615ADSS (*) PS1520ADSS (*) PS2227ADSS (*)
Ugu badnaan (m): 150 150 150
Dhexdhexaadiyaha xargaha (mm): 6 ~ 15 15 ~ 20 22 ~ 27
Min tensile (daN): 300 300 300
L (mm): 120 120 120
Hore: Xarkaha birta ahama
Xiga: Haynta OPGW Hakinta
Anchoring haysa Nooca caaga ah ee ADSS
Ku xiridda isku haysa ilkaha taxanaha APA
Xirmooyinka ka joojinta ee taxanaha ADSS / Round Cable PS
Anchoring haysa Waayo, fiilooyinka fiber indhaha nooca A ...